ကိုဗစ်လူနာတွေကို အလုပ်ဆင်းခိုင်းတဲ့ ထိုင်းစက်ရုံ အာဏာပိုင်တွေစစ်ဆေး
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်က စက်ရုံကိုနယ်မြေအာဏာပိုင်တွေလာရောက်စစ်ဆေးနေပုံ (CJ)
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချွန်ဘူရီ ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ကိုဗစ်-ရောဂါ ကူးစက်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကို ဆက်လက်အလုပ်ဆင်းခိုင်းစေနေတဲ့ Super fast Tecnology co.ltd စက်အပိုပစ္စည်းထုတ်နေတဲ့စက်ရုံကို နယ်မြေအာဏာပိုင်နဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့တွေက ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့က စစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မအေးအေးမာကပြောပြပေးမှာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ နေ့စဉ် ကိုဗစ်ကူးစက်သူတွေ သောင်းနဲ့ချီပြီး ရှိနေချိန်မှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေအများဆုံး လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီပြည်နယ် နောင်စိုင်မြို့က စက်အပိုပစ္စည်းထုတ်စက်ရုံမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်ပြီး အလုပ်ဆင်းခိုင်းထားတာပါ။
စက်ရုံအတွင်းမှာ အလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော် ရောဂါပိုးကူးဆက်နေပေမယ့် စက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေက အလုပ်သမားတွေကို လူနာနဲ့ လူကောင်းပါ ဆက်လက်အလုပ်ဆင်းခိုင်းနေတာကြောင့် ရောဂါပိုးကူးဆက်ခံရမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ အလုပ်ဆက်မဆင်းရဲဖြစ်နေတာပါ။ ဒီအခြေအနေကို နယ်မြေလူထုနဲ့ ကျေးရွာသူကြီးက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဆီ တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့က ချွန်ဘူရီ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Sukon Suwan Saksin ဦးဆောင်တဲ့ နယ်မြေအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး-အလုပ်သမား ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ ဒီစက်ရုံကို သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ကြချိန်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးMr. Sukon Suwan Saksin က ထိုင်းဘာသာနဲ့ အခုလို ပြောသွားပါတယ်။
အခုလို စက်ရုံတွင်း ရောဂါပိုးကူးစက်နေပြီဆိုရင် ပိုးတွေ့လူနာတွေကို သီးသန့်ဖယ်ထုတ်ထားပြီး စက်ရုံကို ရောဂါပိုးသန့်စင်အောင် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းတာမျိုးတွေလုပ်ရပါမယ်၊ စက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေအနဲ့ ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ကပ်ရောဂါအရေးပေါ်ဥပဒေအရ ဆက်လက်အရေးယူခံရမယ်-လို့ ပြောသွားတာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီပြည်နယ်ဟာ ရောဂါကူးဆက်မှုနှုံးအမြင့်ဆုံး ဖြစ်လာနေတာကြောင့် နယ်မြေအတွင်း ပိုမိုတင်းကြပ်တဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ပြည်နယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ အခုဆိုရင် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၄၈၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ လူနာအသစ် ၁၄,၀၀၀ ကျော် ထပ်တိုးလာနေပါတယ။ဒီထဲမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်ရှင်။
ကိုဗဈလူနာတှကေို အလုပျဆငျးခိုငျးတဲ့ ထိုငျးစကျရုံ အာဏာပိုငျတှစေဈဆေး
ထိုငျးနိုငျငံ၊ ခြှနျဘူရီ ပွညျနယျအတှငျးမှာ ကိုဗဈ-ရောဂါ ကူးစကျနတေဲ့အလုပျသမားတှကေို ဆကျလကျအလုပျဆငျးခိုငျးစနေတေဲ့ Super fast Tecnology co.ltd စကျအပိုပစ်စညျးထုတျနတေဲ့စကျရုံကို နယျမွအောဏာပိုငျနဲ့အလုပျသမားအဖှဲ့တှကေ ဇူလိုငျလ ၂၃ ရကျနကေ့ စဈဆေးနတေဲ့အကွောငျး ထိုငျးအခွစေိုကျ ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ မအေးအေးမာကပွောပွပေးမှာပါ။
ထိုငျးနိုငျငံထဲမှာ နစေ့ဉျ ကိုဗဈကူးစကျသူတှေ သောငျးနဲ့ခြီပွီး ရှိနခြေိနျမှာ မွနျမာအလုပျသမားတှအေမြားဆုံး လုပျကိုငျနတေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံ ခြှနျဘူရီပွညျနယျ။ နောငျစိုငျမွို့က စကျအပိုပစ်စညျးထုတျစကျရုံမှာ ကိုဗဈကူးစကျခံထားရတဲ့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားတှကေို ပုံမှနျအတိုငျး ဆကျပွီး အလုပျဆငျးခိုငျးထားတာပါ။
စကျရုံအတှငျးမှာ အလုပျသမား ၁၀၀ ကြျော ရောဂါပိုးကူးဆကျနပေမေယျ့ စကျရုံတာဝနျရှိသူတှကေ အလုပျသမားတှကေို လူနာနဲ့ လူကောငျးပါ ဆကျလကျအလုပျဆငျးခိုငျးနတောကွောငျ့ ရောဂါပိုးကူးဆကျခံရမှာ စိုးရိမျနတေဲ့ အလုပျသမားတှဟော အလုပျဆကျမဆငျးရဲဖွဈနတောပါ။ ဒီအခွအေနကေို နယျမွလေူထုနဲ့ ကြေးရှာသူကွီးက သကျဆိုငျရာအာဏာပိုငျတှဆေီ တိုငျကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မနေ့၊ ဇူလိုငျလ ၂၃ ရကျနကေ့ ခြှနျဘူရီ ပွညျနယျအုပျခြုပျရေးမှူး Mr. Sukon Suwan Saksin ဦးဆောငျတဲ့ နယျမွအောဏာပိုငျတှနေဲ့ ကနျြးမာရေး-အလုပျသမား ကာကှယျရေးအဖှဲ့တှဟော ဒီစကျရုံကို သှားရောကျ စဈဆေးခဲ့ကွခြိနျမှာ အုပျခြုပျရေးမှူးMr. Sukon Suwan Saksin က ထိုငျးဘာသာနဲ့ အခုလို ပွောသှားပါတယျ။
အခုလို စကျရုံတှငျး ရောဂါပိုးကူးစကျနပွေီဆိုရငျ ပိုးတှလေူ့နာတှကေို သီးသနျ့ဖယျထုတျထားပွီး စကျရုံကို ရောဂါပိုးသနျ့စငျအောငျ ပိုးသတျဆေးဖွနျးတာမြိုးတှလေုပျရပါမယျ၊ စကျရုံလုပျငနျးရှငျတှအေနဲ့ ဒီအခကျြတှကေို လိုကျနာလုပျဆောငျမှုမရှိဘူးဆိုရငျ ကပျရောဂါအရေးပျေါဥပဒအေရ ဆကျလကျအရေးယူခံရမယျ-လို့ပွောသှားတာပါ။
ထိုငျးနိုငျငံ ခြှနျဘူရီပွညျနယျဟာ ရောဂါကူးဆကျမှုနှုံးအမွငျ့ဆုံး ဖွဈလာနတောကွောငျ့ နယျမွအေတှငျး ပိုမိုတငျးကွပျတဲ့ဥပဒတှေထေုတျပွနျဖို့ ပွငျဆငျနတေဲ့ ပွညျနယျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံအတှငျးမှာ အခုဆိုရငျ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာ ၄၈၀,၀၀၀ ကြျောရှိပွီး ဇူလိုငျလ ၂၄ ရကျနမှေ့ာ လူနာအသဈ ၁၄,၀၀၀ ကြျော ထပျတိုးလာနပေါတယ။ဒီထဲမှာမွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားတှလေညျး ပါဝငျနပေါတယျရှငျ။
#MyanmarMigrants #Covid19 #ThailandCovid #VOABurmese